Baningi abathengi minyaka Esehlulekile ukuxazulula inkinga yini okumele uyenze uma amabhethri efulethini kancane efudumele.
Isidingo sokubhekana nenkinga
Uma isizini Ukushisa uqalile, kanye Izinsiza wayengafuni ukunikeza ukushisa in the efulethini, kufanele sizame ukuxazulula le nkinga. Kwenzeka ukuze ibhethri phakathi isizini Ukushisa uhlala sivivi, kuyilapho central Ukushisa amasevisi abathengi sebeqala nodaba kufanele aye kuphi.
abameli abanolwazi Sisikisela ukuqala ukubiza abafanelekile. Izinsiza zomphakathi Kumele uphendule ukukhathazeka ukuthi ukuzwakala radiators abandayo ngokuphelele. Kulokhu, igemfe kungase kube kushisa. Ekuphatheni umthengi kumele aphendule kuleli cala, lapho kurediyetha nendlu yaqala ukufudumala kancane kuphela. Cold angahlala eyodwa Ukushisa isici, kuyilapho bonke abanye kungaba kushisa.
Ngaphambi kokuxhumana amasevisi afanele kumele ayejwayele ebekwe lokushisa iziqondiso emakamelweni eshubile.
Uma uhlangabezana nenkinga uma amabhethri akakho ofudumalayo, yini okufanele uyenze, ngempela kudingeka zixazululwe. Ekuqaleni, udinga ukushaya ucingo ukuze inkampani Dispatch, okuyinto unomthwalo ukushisa ukulondoloza indlu. Kungaba izinhlangano bobabili ezizimele nezikahulumeni. Kufanele silungise isikhathi nosuku selisenzile lesi sicelo, inani opharetha, okuyinto amukela it. Emini isicelo sithunyelwa alunge, ngokusekelwe imiphumela yayo yathumela endaweni ye uchwepheshe. umsebenzi wakhe uyoba ukuba uhlole circuit ezishisayo, kanye nesilinganiso lokushisa emakamelweni. Kusekelwe ekwazisweni ihlanganiswe isitifiketi ukuhlolwa, ikhophi eyodwa basale nomnikazi efulethini. Lowo Mbhalo wangonyaka we manje kucatshangelwe ngesonto noma ngaphansi. Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi zokukhokha akagcinanga kuzo zonke izimo kuthiwa. Khona-ke, uma amabhethri akuzona efudumele, akungabazeki ukuthi ingabe kudingeka okwengeziwe kubhekwane. Ngesisekelo isenzo izilinganiso odlule kuzomele wenze isenzo isimangalo. Lokhu kuzosiza ummeli, idokhumenti kufanele bakhombise ukuthi amasevisi anikezwa ngendlela efanele.
Isimangalo luzakwenziwa e amakhophi amabili, enye yazo lidlule inkampani ukushisa ukuthengisela, kanti eyesibili umthengi. On ke udinga qiniseka ukwenza inothi usuku Dispatch, okungase kwenziwe ngeposi. Izinkulumo ezinjalo ohlanganyelwe asabela ngokushesha ngokwanele, Nokho, futhi kulokhu kungase kwenzeke ukuthi amabhethri akakho ofudumalayo. Pho, yini okudingeka eminye kubhekwane.
Uma isimangalo wasala ngaphandle ukunakwa, futhi ibhethri Kusafudumele, kubalulekile ukwazi ukuthi iyiphi Inkantolo endaweni yakho wahlanganyela izindaba zomphakathi. Lezi zihlanganisa nokuphathwa neziphathimandla zendawo, lapho kunokulinganisela okufanele uMnyango emnothweni kamasipala. Umthengi angacela futhi umugqa ashisayo, lapho imibuzo umhloli uzophendula.
Uma amabhetri akakho ofudumalayo, yini okufanele uyenze kuzokusiza unqume lesi sihloko. Ochwepheshe ukweluleka ukuthi uxhume ku parallel kunjalo iConsumer Protection uMnyango. Isikhathi esining impela, kodwa namanje ngezinye izikhathi kuye kudingeke afinyelela kulokhu kokugcina, okuyinto ukukhonza ehhovisi lomshushisi kanye nenkantolo.
isixazululo Independent amabhethri ezibandayo
Uma unquma namanje isebenze ngokuzimela, kungenzeka ukuba sicabangisise ngalokho inkinga kungaholela ongaphakeme lokushisa ukushisa echibini. Icala ezivamile wukuthi emaphaketheni emoyeni. Uma indlu ifakwe isizukulwane yakamuva radiators, kufanele unikezwe isikulufa wopha, it has a imbobo ngoba kufuneka uveze ukukhungatheka. Ivame afakwe engxenyeni engenhla ibhethri, kusukela emoyeni zanqwabelana khona.
Uma uvula i-ngokwewashi valve, uyolizwa shweza isici. Uma amanzi uqala avuze, kwenda kungenziwa shaqa. Ukuqinisekisa ukuthi emoyeni iphelelwe ngokuphelele, ngisho nangemva kokuziphatha amanzi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esimweni isigamu-evulekile ingenziwa njengoba uketshezi angashiya ukugeleza komoya.
Uma efulethini kuyinto ibhethri ezimbi efudumele, yini okufanele uyenze, yebo, kubalulekile ekuxazululeni. Ochwepheshe bathi ukunciphisa ivolumu yamanzi kurediyetha kuwo akudingekile isikhathi eside, lizovula ngempumelelo empompini emva kwesikhashana. Lokhu kuzakwenza ukuqalisa phansi emanzini emoyeni.
Isizathu: uxhumano okungalungile
nokusebenzisa kabi dlula, okuyinto uba i-adaptha kungadala Kungasebenti kahle kwaletinye kurediyetha. Lo msuka isethwe phambi kurediyetha, ukuze ukwazi susa ibhethri.
Uma izinga lokushisa egumbini ingabe engavumelani nawe, kungenzeka ukuthi dlula valve zivuliwe. Lokhu kubonisa i ukusakazwa okungajwayelekile yamanzi. Uma indlu kahle ibhethri evuthayo, yini okufanele uyenze, zama ukuxazulula cishe bonke abanikazi ezindlini. Kwezinye izimo, imbangela yenkinga - ekukhetheni okubi of esalisekela noma ezimbili-pipe uhlelo. Naphezu kweqiniso lokuthi amanzi kumele kube namandla anele Ukushisa, esigabeni wokulungiselela kubalulekile ukuba afeze ukubala umthamo ibhethri futhi ububanzi we ipayipi. Lokhu kubaluleke kakhulu njengoba uhlobo uhlelo ezikhethiwe.
Isizathu: avimbekile uhlelo
Kwenzeka ukuze ibhethri ayisekho efudumele ngenxa yokuthi kukhona ukuvaleka. Kwase kuphele amashumi eminyaka evele sangaphakathi amashubhu embozwe nokugqwala, okuyinto emabhuloki ukufinyelela ukuba amanzi. Ngesikhathi esifanayo, ochwepheshe ukweluleka ukuba sifeze yokuhlanza noma kurediyetha esikhundleni.
Uma uhlangabezana nenkinga, okuyinto lubonakaliswa yokuthi ibhethri kubi heats efulethini, yini okufanele uyenze, sizoyaphi sabuka ngenhla. Nokho, yonke into ingaba ngisho esikhaleni aphansi. Futhi uma kunjalo, esebenzisa dlula kuyodingeka ukusika ukugeleza kokupholisayo ukuba kurediyetha, okuyinto kuyogcina ibhethri sesimweni ukusebenza. Uma yokuhlanza Kwenziwa, kungcono ukusebenzisa Iseluleko ezithile ezilandelayo.
Ukuze afeze umsebenzi onjalo kuyadingeka a ingcindezi eliphezulu kokupholisayo supply. Ungabheki lokho wonke ebhuqwini aphume kurediyetha, uma ukuxhuma hose kusukela empompini. Kunconywa ukuba aphinde uhlole uxhumano, ngaphambi kokufaka ibhethri endaweni. Uma uzama ukuxazulula inkinga yokuthi yini ukwenza uma amabhethri akakho ofudumalayo, futhi sithole okuningi ngokweqile kurediyetha, kutuswa ukuba enze okufanayo yokuhlanza isinyathelo maqondana wonke amanye amabhethri endlini.
Ezimweni lapho efulethini lokushisa ongaphakeme, akuzona zonke ukuthi ezingavamile. Ukushisa naphakathi may neze kuze kube kurediyetha zokugcina endleleni. Lokhu kungaba iqiniso esimweni lapho uhlelo yakhelwe kahle, noma ububanzi ipayipi ayihambisani ibalwa. Kaningi ngokungalungile akhethiwe ratio ivolumu amanzi namandla futhi ukuzungeza.
Uma namanje abazi ukuthi yini okumele uyenze uma ibhethri kubi efudumele, kubalulekile ukuba banake futhi yokuthi futha enza ngayo umsebenzi walo.
Uyini namademo? Incazelo umlando
Sakha izinhlobo ezintsha ngenalithi. Indlela yokwenza izimbali kusuka foamirana?